China Abs casing 2000+ macircule hupenyu lithium ion bhatiri 12V 100Ah neBMS Mugadziri uye Mutengesi | LIAO
Bhasikoro ＆ Mudhudhudhu & Scooter
Simba rekuchengetedza bhatiri
Solar, Wind hurongwa
Imba simba rekuchengetedza system
UPS (Isingamisike Simba Rinowanikwa)
Telecommunication base chiteshi
Online yekutarisa system
Abs casing 2000+ macircule hupenyu lithium ion bhatiri 12V 100Ah neBMS
China inogadzira 19 inch rack inomisikidza 48V 50Ah lithium ion bhatiri (LiFePO4) yekutaurirana
Bolt mhando prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 bhatiri sero rekushandisa magetsi uye simba rekuchengetedza
Caravan inofambisa bhatiri LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 bhatiri pack ine yakavakirwa-mukati mundiro uye SOC
SOC uye mubato zvaisanganisira 36V 40Ah LiFePO4 bhatiri pack yemagetsi sikuta / mudhudhudhu / bhamba mota
Yakatsva kutengeswa yakawanda-inoshanda inotakurika magetsi magetsi ne AC uye DC zvinobuda
1. Iyo yepurasitiki inokanda 12V 100Ah lithium ion bhatiri pack kune yegungwa application.
2. Hupenyu hwakareba hwekutenderera: Rechargeable lithium ion bheteri sero, ine anopfuura anopfuura 2000 macircule anova manomwe nguva einotungamira acid bhatiri.
Muenzaniso Nha. ENGY-F12100T
Zita remagetsi 12V
Chezita chinzvimbo 100Ah
Max. kuenderera mutero iyezvino 100A
Max. kuenderera kubuda zvino 100A
Hupenyu hwekufamba kwenguva Ka2000 nguva
Charge tembiricha 0 ° C ~ 45 ° C
Kubuda tembiricha -20 ° C ~ 60 ° C
Kuchengetedza tembiricha -20 ° C ~ 45 ° C
Kurema 13.5 ± 0.3kg
Divi 342mm * 173mm * 210mm
Kushanda Zvemvura, magetsi ekushandisa, ect.
3. Kurema kwechiedza: Inenge 1/3 huremu hwemabhatiri eacid acid.
4. Kuchengetedzwa kwepamusoro: LiFePO4 (LFP) ndiyo yakachengeteka lithiamu bhatiri mhando inozivikanwa muindasitiri.
5. Green simba: Haina kudhonza kune zvakatipoteredza.
Indasitiri Ruzivo Uye Nhau
Mumakore achangopfuura, musoro wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza wakwezva hunowedzera kutarisisa Mhando dzesimba simba remagetsi dziri kushanduka zvishoma nezvishoma kubva kune fossil simba kuenda kune yakaderera-kabhoni simba. Maitiro emagetsi ari kuwedzera zvishoma nezvishoma, uye atanga kukwidziridzwa zvine simba nekuiswa pazvikepe.
Ngarava dzemagetsi dzine zvazvakanakira kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvakasvibirira, zero kusvibiswa, kuchengetedzeka uye mutengo wakaderera wekushandisa, uye yavo yekushandisa mitengo yakadzikira zvakanyanya pane dhiziri neLNG ngarava dzemafuta. Pamusoro pezvo, ngarava dzemagetsi dziri nyore muchimiro, dzakadzikama mukushanda, uye dzakaderera mumitengo yekugadzirisa, zvichivaita kuti vakodzere mafambiro emamiriro ekunze emangwana.
Ngarava dzemagetsi dzinoda kutakura huwandu hukuru hwemabhatiri, uye dziine zvirevo zvakakwirira zvebheteri kuburitsa mwero, kutenderera, uye mutengo.
Panyaya yesarudzo yemhando yebhatiri, ichienzaniswa nemabhatiri e-lead-acid, mabhatiri e lithiamu iron phosphate ane mabhenefiti akajeka maererano nekuchengetedza, kuwanda kwesimba, uye kuita kwekutenderera. Nekudaro, lithium iron phosphate mabhatiri parizvino ari kushandiswa zvakanyanya mumabhazi emagetsi matsva neminda yekuchengetedza magetsi. Iyo lithiamu yesimbi phosphate mabhatiri anoshandiswa mumagetsi ngarava anotarisana nezvakawanda zvehunyanzvi verification, zvinoda kuomarara kutsanangurwa uye yakakwira zvigadzirwa zvigadzirwa.
Lithium iron phosphate prismatic simba mabhatiri ane zvirinani mashandiro maererano nechengetedzo, kutenderera uye chiyero ndizvo zvakanyanya. Uye sezvo huwandu hwe lithiamu yesimbi phosphate mabhatiri anoshandiswa mumunda wezvikepe zvemagetsi zvinowedzera mune ramangwana, mutengo wezvigadzirwa ucharatidza kudzikira.
Mune ramangwana, maitiro echikepe lithiamu bhatiri anozotarisa zvikuru pazvikepe, zvikepe zvekuona nzvimbo, ngarava dzemukati menyika, misika yekutakura zvikepe mumaguta emahombekombe parwizi, nezvimwe. Dzimwe ngarava hombe nepakati nepakati dzinoshandisa lithiamu mabhatiri pane lead acid. , iyo ichawedzera kushandiswa kwema lithiamu mabhatiri muzvikepe.
Pashure: Bolt mhando prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 bhatiri sero rekushandisa magetsi uye simba rekuchengetedza
Zvadaro: China inogadzira 19 inch rack inomisikidza 48V 50Ah lithium ion bhatiri (LiFePO4) yekutaurirana
Kwete. 15 Yangcheng Road, Pingyao, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, 311115, China
SNS & Online Ratidza
For kubvunza pamusoro zvigadzirwa zvedu kana yakagadzirirwa mhinduro, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.